RW Rooble oo tegaya Xarunta NISA, Hal arrin oo laga filanayo - Awdinle Online
RW Rooble oo tegaya Xarunta NISA, Hal arrin oo laga filanayo
Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la filayaa in Caawa ama Maalinta berito ah in uu booqasho ku tago Xarunta Hay’adda Nabadsugida Soomaaliya ee NISA oo ku taalla degmada Shibis.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya booqashadiisa Xarunta NISA ,waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu halkaasi kula kulmayo Taliyaha NISA Fahad Yaasiin, si wadatashi, kaddib laga yaabo in Ra’iisul Wasaaraha uu ku dhawaaqo Golihiisa Wasiirada.
Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya ayaa dad badan u arkayeenArintan Nin si sax ah Shaqadiisa u qavsanaya, hayeeshee tallaabadaan ayaa waxaa ay tahay mid bahdil ah, iyada oo ay u muuqato in Ra’iisul Wasaaraha uu yahay shaqsi magac u yaal ah oo xor aheyn, isla markaana ku Shaqeynaya Amarka Madaxweynaha.
Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa tan iyo markii la Magacaabay waxaa uu ka qeyb galay kulamo kala duwan, waxaana kulamadaas kala qeyb galay siihayaha Ra’iisul Wasaaraha Mahdi Guuleed oo saaxiib dhow la ah Madaxweynaha.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ka hadlay geerida Cali Khaliif
Next articleHalka lagu Aasayo Meydka Cali Khaliif oo la shaaciyay